Ukusetwa kwelali ene-gastro pubs onokuthi uhambe uye kuyo.
Isihlomelo esiziphetheyo kunye nesinesitayile kwilali enkulu ene-pubs ezine / iindawo zokutyela ezineendawo zokutyela ezithandekayo ngaphandle. Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle nge washer dryer kunye nendawo yokuphumla ene gas log burner. Ngaphandle kwendawo yesidlo sakusasa esinelanga/neziselo zangokuhlwa. Ukuhamba umgama wesikhululo se-mainline (eLondon imizuzu engama-50) kunye nokuqengqeleka emaphandleni. Ukuqhuba okufutshane ukuya elwandle okanye elwandle lwemveli, zoo kunye neendawo zembali. Abanini bahlala kwindlu ekufutshane. Ukucoca okuphuculweyo kunye nokungena okungenazitshixo.
Ekuqaleni le yayiyigaraji evaliweyo kwindlwana yethu ka-1937- igcina imiqadi emidala kunye neemilo zophahla (enendawo yokulala enentloko elinganiselweyo njengoko iifoto zibonisa) kodwa ihlaziywe ukubonelela ngobunewunewu bale mihla ukuze uhlale kamnandi. Sineseti yepikiniki kunye nezixhobo ezisisiseko zePilates kunye nemethi yokusetyenziswa.
Indawo yokuhlala enkulu enevenkile / irestaurant / ikhemesti kumgama wokuhamba
Ukutya-One Stop Convenience ivenkile (10 imizuzu ukuhamba)
Iivenkile zeCo-op (imizuzu eyi-15)
Ibhula kunye nevenkile yeentlanzi ezintsha (imizuzu eyi-15)
Ivenkile yefama yaseStonefield 5 imizuzu yokuqhuba.
Thatha isiTshayina, amaIndiya kunye neentlanzi kunye neetshipsyiphu ngokuodola kwangaphambili.
Ii-Pubs kunye neendawo zokutyela ezibonelela ngeendawo zokuthatha, ezipholileyo ngaphakathi kunye neendawo ezithandekayo ezigqunyiweyo / ezishushu zangaphandle ukuze ukonwabele.
Sihlala kwizakhiwo kwaye siyathanda ukunxibelelana neendwendwe zethu ukuba ziyafuna, okanye zihloniphe ubumfihlo bazo ukuba azifuni! Sineminyaka engaphezu kwama-30 yolwazi lwasekuhlaleni ngoko siyakuvuyela ukucebisa okanye ukulungiselela utyelelo ukuba luyimfuneko.
Sihlala kwizakhiwo kwaye siyathanda ukunxibelelana neendwendwe zethu ukuba ziyafuna, okanye zihloniphe ubumfihlo bazo ukuba azifuni! Sineminyaka engaphezu kwama-30 yolwazi lwasekuh…